Izindaba - Umlando wokupheka wokungeniswa
Imodeli yenkinobho ye-Push
Imodeli yokuthinta isikhumba
umpheki webhethri welanga
Imikhiqizo emisha yokupheka
I-FAQ yokupheka engaphansi
Umlando wokupheka wokungeniswa
I-China yaqala ukukhiqiza umpheki wokungeniswa ngawo-1980, ngemuva kweminyaka ecishe ibe ngu-30 yentuthuko, imboni yokupheka yokungenisa isheshisa inkambiso yentuthuko, i-induction cooker idlala indima ebaluleke kakhulu empilweni yabantu.
Ngo-2005, imboni yokupheka yokungenisa yaseChina yakhula ngokushesha ngokukhishwa kwamayunithi ayizigidi eziyi-14.5, okwenyuka ngamaphesenti angama-87.34 ngaphezu kwamayunithi ayizigidi ezingu-7.74 ngo-2004 Ngo-2005, inani lokuthengisa lonyaka lokupheka lokupheka lalingu-13.76 million, okwenyuka ngaphezu kuka-90% uma kuqhathaniswa nezigidi eziyi-7.205 ngo-2004.
Ngonyaka we-2006, ukuthuthukiswa komkhakha wokupheka okuphekiwe okwenziwe ngeChina okwenziwe ngokushesha, ukukhiqizwa kwaminyaka yonke kwamayunithi angaphezu kwezigidi ezingama-22, kukhuphuke ngo-51.72% ngesikhathi esifanayo ngo-2005, ukuthunyelwa kwamanye amazwe kwaminyaka yonke kwezigidigidi eziyi-2.1, cishe amaphesenti angama-50 ngaphezulu kunesikhathi esifanayo ngo-2005, i-induction cooker, okuqhubekayo ukwenza ngcono izinga lokuhlushwa komkhiqizo kwesabelo semakethe esiyishumi esiphezulu sama-92.6%, ngokuya phambili ekugxilisweni kwesabelo semakethe yokuqala yomkhiqizo, i-induction cooker ezintweni zasekhishini ukuthola iso lokukhula komkhiqizo.
Ngo-2007, ngemuva kokuba intengo ye-induction cooker microcrystal panel yehlisiwe, ingxenye yamabhizinisi abapheki be-induction eholwa nguGalanz, Midea, Jinling, Kewei, njll yaqala “impi yamanani”. Futhi yile mpi yamanani entengo, yenza iqoqo ye-elektromagnetism yesithando sebhizinisi elizulazula emaphethelweni e-delister ngenxa yomkhiqizo ongenakulinganiswa ekuqaleni owalahleka ukusebenza ngokuphelele, futhi kwenza izinga lokuhlushwa lomkhiqizo lomkhakha lingathuthuka. Ngo-2007, ukuguqulwa kwesilinganiso semboni yokupheka ye-induction kukhulu, ngo-Okthoba kuphela kukhona okungu-20 % webhizinisi lisusiwe.
Imakethe yokupheka yokungeniswa ngemuva kokubona ukuchuma ngo-2005, ingxenye yesibili ka-2006 yahlangabezana ne- “Waterloo” kwaze kwaba ngu-2007 yaqhubeka ibuthakathaka, yangena kwikota yesithathu ka-2008, imakethe yokupheka yokungeniswa yangenisa unyaka ekuthengisweni kwesizini encane kakhulu. Yenkinga yezezimali emhlabeni jikelele kanye nokwehla kwezomnotho, imishini emincane ekwehleni kokukhula okuphelele embonini yemishini yasekhaya eyingqayizivele Ngo-2008, amabhizinisi asekhaya abandakanyeka ekuthengisweni kwemishini emincane yasekhaya ezingxenyeni ezintathu zokuqala zokukhula.
Isikhathi Iposi: Nov-19-2020
Umehluko phakathi kwe-cooke induction ...
Ulwazi lokuhlukaniswa kwompheki wokungeniswa